« Rallye International de Madagascar »: tsy nisy nahatohitra i Ando sy i Rivo | NewsMada
« Rallye International de Madagascar »: tsy nisy nahatohitra i Ando sy i Rivo
Nandrombaka ny fandresena teo amin’ny “Rallye international de Madagascar 2018” ny ekipazin’ny FMMSAM, nisy an’i Rivo sy i Ando. Tsy nisy nahatohitra mihitsy izy ireo, nampiseho fahaiza-manao tanteraka.
Voalohany i Rivo sy i Ando, mpanamorin’ny klioba FMMSAM, teo amin’ny andiany faha-39 amin’ny “Rallye international de Madagascar”. Fifaninanana notanterahina tany Alaotra Mangoro, ny 20 ka hatramin’ny 22 septambra lasa teo. Fahaiza-mitantana ny fotoana, fahafehezana ireo teknika samihafa, miampy ny fitandremana isan-karazany.
Samy nampiasain’i Rivo sy i Ando avokoa ireo, tao anatin’ireo dingana manokana “ES” miisa 14 nifaninanana, tamin’ity hazakaza-piarakodia ity, ka nibatan’izy mirahalahy ny fandresena. Nanome tombony ho azy ireo ihany koa ny tanjaky ny fiarakodia nentiny.
Teo amin’ny andro fahatelo, notontosaina ny asabotsy, efa nanomboka nazava ny fandresena ho azy izy ireo, na niezaka nanao izay ho afany aza i Tahina sy i AT. Lasan-dry zalahy avokoa mantsy ireo “ES” rehetra natao tamin’izany.
Anisan’ny nafana vay kosa ny teo amin’ny laharana fahatelo satria nifandimbiasana hatrany ny nahazo izany, niadian’i Dani sy i Rina ary i Teddy sy i Herman. Niala i Tahiana sy i Tahiry, teo amin’ny “ES 12”, noho ny fahasimbana teknika nahazo ny fiara nentiny.
Dingana manokana, nampanano sarotra ny mpanamory rehetra, ny “ES 2”, noho ilay “chican” na ny fiolakolahana mifanakaiky, miampy ireo vodihazo tao anaty lalana, ka naha betsaka ireo niala an-daharana.
Ireo dimy tonga voalohany :
1-Rivo / Ando – (Subaru Impreza) – FMMSAM – (2 ora 24 mn 21.2 s)
2-Tahina / AT – (Subaru Impreza) – Asacm – (2 ora 27 mn 39.0 s)
3-Teddy / Herman – (Ford Ranger) – FMMSAM – (2 ora 33 mn 05.8 s)
4-Herivonjy / Toky – (Foton Tunland S) – FMMSAM – (2 ora 34 mn 48.0 s)
5-Frederic / Jimmy – (Isuzu D-Max) – Ama / Asacm – (2 ora 35 mn 38.1 s)
HOY IZY IREO :
-Rivo (mpanamory FMMSAM) : nanao izay nahatongavana fotsiny satria efa nahazo tombony, teo amin’ny andro faharoa. Tsara koa ny lalana sady maina ka afaka nanatsara ny fe-potoana. Na voalohany aza, mila miezaka amin’ny “rallye” farany.
-Tahiana (mpanamory Asacm) : tsara be ny lalana, samy nahavita fe-potoana tsara, saingy olana ilay fahavoazan’ny fiara teo amin’ny andro faharoa ka nahavery 30 s anay. Olana ny tao amin’ny “ES 2”, nisian’ny “chican”. Mbola ho eo amin’ny dingana manaraka.
-Dani (mpanamory Asa Tana) : tsy nisy ny olana fa afaka niatrika ilay fifaninanana tao anatin’ny filaminana. Nanahirana kely fotsiny ny “ES” natao alina, noho ny zavona sy ny vovoka. Tsy maintsy hiatrika ny “rallye” farany satria tsy mbola ampy ny isanay.
-Teddy (mpanamory FMMSAM) : ny olana, tsy afaka nanao ny antsasaky ny “reconnaissance” noho ny fisian’ny fahoriana tao amin’ny fianakaviana. Na izany aza, nanana olana tamin’ilay “chican” tao amin’ny “ES 2”. Voalohany amin’ny sokajinay izahay izao.
-Koloina (mpanamory FMMSAM) : tsy maintsy hiatrika ny “rallye” farany satria tsy mbola azo ny anaram-boninahitra fa hifampitadiavana amin’i Alcazaria.